Imvelo Nendawo Yokuphumula Yangaphandle - 'Prikichi' Cabin - I-Airbnb
Imvelo Nendawo Yokuphumula Yangaphandle - 'Prikichi' Cabin
Balashi, Santa Cruz, i-Aruba
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Abigail
Baleka kusukela ohlangothini olumatasa lwesiqhingi uye endaweni eyimfihlo ezungezwe imvelo. Nethezeka echibini, kubhavu oshisayo, noma kuma-hammocks ngaphansi kwezihlahla ngesikhathi izingane zakho zidlala ebaleni lokudlala. Qeda usuku ngomoya omnandi wase-Aruban kuyilapho ukosa inyama futhi uphuza eduze komlilo. Indawo futhi ilungile uma ufuna ukuhlola sonke isiqhingi ngogu oluseduzane (Mangel Halto) okuwuhambo lwemizuzu emi-5 nje ukusuka lapho.
Zonke izinsiza eziboniswe ezithombeni ZINGASEMFIHLO NGOKUPHELELE ukuze zisetshenziswe. Akwabelwa muntu omunye ngaphandle kwalabo abaqasha indawo. Le ndawo iphinde ibe nesango eliyimfihlo lokungena elinokhiye walabo abahlala lapha. Izivakashi ziyakwazi ukufinyelela zonke izinsiza eziboniswe ezithombeni ezifana nephuli, ubhavu oshisayo, inkundla yokudlala, ohhoko, i-cabana, nokunye okuningi.
Le ndawo ibizwa ngeBalashi, etholakala esifundeni saseSanta Cruz. Indawo etholakala kuyo leli khabhinethi iyibanga nje elincane ukusuka emayini yegolide engasasebenzi kanye nendawo ecebile ye-ecosystem waterside 'Spaans Lagoen'. Ulwandle oluseduzane luwuhambo lwemizuzu emi-5 nje (iMangel Halto) kanye nezindawo zokudlela ezidumile njenge-Zeerovers kanye neFlying Fishbone nazo ziwuhambo lwemizuzu eyi-10.
Le ndawo iphakathi nendawo yesiqhingi, okwenza kube lula ukuhlola izinhlangothi zombili zesiqhingi nentshonalanga enamabhishi adume kakhulu njenge-Eagle Beach kanye ne-Arashi Beach nasempumalanga, ungathola amanye amabhishi aminyene kakhulu njenge I-Baby Beach kanye ne-Roger's Beach.
Hlola ezinye izinketho ezise- Balashi namaphethelo